Abezonxibelelwano Martech Zone
PressRush: Iplatifomu yokuPhakamisa uPolite yokuFikelela kweNtatheli
Lwesine, Disemba 31, 2015 NgoMvulo, nge-21 kaJanuwari, 2019 Douglas Karr
Yonke imihla ndifumana uninzi lweepaki kwibhokisi yam engenayo. Uninzi lwazo alubhalwanga kakuhle, uninzi aluchaphazeli indawo yam, kodwa kuhlala kukho igolide kwimfumba ye-PR yogaxekile ukuze ndinike ingqalelo. Ndifumene isandi kule veki apho i-imeyile ibonakale yahluke kakhulu kwaye yanikezela ngamava amahle kum.
Ndiyalithanda eli thuba lokwazisa inkampani yobudlelwane noluntu kwelinye icala ngokuchaneka kwesandi. Ukuba ndiyayithanda inowuthi (eyayingaphantsi kwamaqhosha), kwafuneka ndiphendule kwidilesi ye-imeyile evela kuyo. Yeyiphi indlela emnandi kunye neendlela ezichubekileyo zokunxibelelana noluntu ukuze kuqinisekiswe ukubaluleka kwempembelelo okanye ibhlogi abanxibelelana nayo.
Ngelixa ndiphendule kwisandi esithile, ndikwajongile neqonga ebelibhalwe kulo- Uxinzelelo. Nge-Pressrush, unokuseta izilumkiso kwizihloko, wenze imingxunya, abaphembeleli bophando, kwaye uphuhlise uluhlu lwesiko oza kuthumela kulo. Kwaye xa kuthunyelwa iipaki zakho, zisebenzisa le ndlela ndiyichaze ngasentla.
Ndiyakholelwa ngamandla ukuba isisombululo asikokuthumela iipaki ezininzi. Isisombululo kukwakha ubudlelwane obuhlala ixesha elide obuqala ngobuqu, kuphandwe kakuhle, kujoliswe kakhulu, kwaye kufikelelwe ngokuchanekileyo ngexesha. Nge-PressRush, ndibeke ukwakha isixhobo ukukunceda wenze loo nto. UVille Laurikari, uMseki wePressrush.
Ukwakha uluhlu kulula usebenzisa i-injini yokukhangela yangaphakathi yeNtatheli. Nasi isiphumo se uhlalutyo kunye neemetrikhi, apho ufumana eyakho ngokwenyani:
Kwaye ukuba ucofa iprofayile yam, ungafumana zonke izithuba zamva nje endizipapashileyo kunye nokunxibelelana neeprofayili zam zentlalo kunye nedilesi ye-imeyile.
Iithagethi zinokuhluzwa ngobudala, indawo kunye nokupapashwa. Banokucwangciswa ngokuhamba kwakhona okanye ukufaneleka. Nje ukuba uphonononge intatheli nganye, ungabongeza kuluhlu oluthile lweendaba olunokukhutshelwa okanye lufakwe kulo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, njengoko ulwazi lotshintsho lutshintsha, uluhlu lwakho lugcinwa luhlaziyiwe.
Bhalisela uvavanyo lokucinezelwa
tags: Ukufikelela kwibloggerlolwaziukufikelelaukufikelela kwi-imeyileujongo lokufikelelaCinezelaUVille Laurikari
Iindlela ezi-5 zokunyusa ukufikelela kwi-Organic kuFacebook